China FOTON C6 EVFOTON C6 EV mveliso kunye nabenzi | Ifoto
I-Foton C6 EV ibhasi yedolophu iquka "ukujikeleza okuncinci" okususa isibalo esihle kwiindlela zasedolophini phakathi kweebhloko zedolophu okanye uluntu, ukusombulula ingxaki yezothutho zabahlali base "dolophini yokugqibela", ukuqonda unxibelelwano olungenamthungo phakathi kwesikhululo sikaloliwe kunye yoluntu, indlela yokuma kunye noluntu.
Inqanaba elipheleleyo 6530 * 2230 * 2800
Isondo lamavili 3900
Ukunciphisa Ubunzima 5.9 / 6.2T
Umkhweli / Indawo yokuhlala 36 / 11-17
Umnyango wabahambi Omnye umnyango ophuma ngaphandle
Ibhasi yedolophu yaseFoton C6 ye-EV ibandakanya "ukujikeleza okuncinci" okususa isibalo esihle kwiindlela zasedolophini phakathi kweebhloko zedolophu okanye uluntu, ukusombulula ingxaki yezothutho yabahlali basezidolophini zemayile yokugqibela. Ngenoveli kunye noyilo olwahlukileyo, inezinto ezilula kunye nokusondelelana, ekhokelela kwimfashini "yokusasaza encinci" ibhasi.
I-Foton C6 EV ibhasi yedolophu iquka "ukujikeleza okuncinci" okususa isibalo esihle kwiindlela zasedolophini phakathi kweebhloko zedolophu okanye uluntu, ukusombulula ingxaki yezothutho zabahlali base "dolophini yokugqibela", ukuqonda unxibelelwano olungenamthungo phakathi kwesikhululo sikaloliwe kunye yoluntu, indlela yokuma kunye noluntu. Ngenoveli kunye noyilo olwahlukileyo, inezinto ezilula kunye nokusondelelana, ekhokelela kwimfashini "yokusasaza encinci" ibhasi.
Imagnethi esisigxina iimoto ezihambelanayo
Ukuxhotyiswa ngenkqubo yokulawula izithuthi ezizimeleyo, kunye neminyaka yokusebenza kwezorhwebo.
ngexesha lokutshaja i-12 ukuya kwi-15 yemizuzu ngalo lonke ixesha, kwaye umgama wokuqhuba wentlawulo nganye ufikelela ngaphezulu kwe-150km, ukonga iindleko zepetroli ukuya kuthi ga kwi-80,000 RMB minyaka le.
I-Foton Inceda abaqhubi ukuba benze isicwangciso esigqibeleleyo sokusebenza ngeendlela zohlalutyo lomjikelo wesithuthi kunye nohlalutyo lwezixhobo zokwakha, kubandakanya ezi zinto zilandelayo: imowudi yebhasi, imo yokutshaja, indleko ngeyunithi, imayile / usuku, njl.
I-Foton ibonelela abaqhubi ngokucwangcisiweyo komgca ngokubhekisele kwiindlela zokusebenza kwezithuthi, ezinje ngesixeko esincinci esiphakathi.
Ngokusebenza kwemiboniso yezithuthi, uqeqesho lwabasebenzi, isikhokelo sokusebenza kweqela, iFoton ijonge ukubeka phambili iingcebiso kunye nezisombululo zabaqhubi. Isikhokelo sokusebenza kweqela: Isicwangciso sokwakha isikhululo sokumisa; Uqeqesho lolawulo lweFleet, kubandakanya ulondolozo lwamaxesha ezimoto; Ulawulo lokusetyenziswa kwamandla; Uqeqesho lokucwangciswa kwezithuthi, njengokuhamba rhoqo; Isicwangciso sokutshintsha okumiselweyo kunye nokucwangciswa kwemoto ekude. Umsebenzi wokuBonisa: Uhlalutyo lweMfuno zabaSebenzi; Ukucwangciswa kwesisombululo seMveliso; Isampulu kunye nomsebenzi wokubonisa; Ukujonga idatha kunye nohlalutyo; Izisombululo zokugqibela ezilungiselelwe. Uqeqesho lwabasebenzi: Uqeqesho lolwazi lwe-NEV olusisiseko; Ukulungiswa kunye nokugcinwa kunye noqeqesho lokuchonga iimpazamo; Uqeqesho lwezakhono zokuqhuba.